Mofon’aina – ALAROBIA 13 SEPTAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 13 SEPTAMBRA 2017
Fitsarana farany, Vavolombelona
34 Ary nantsoiny hanatona Azy ny vahoaka mbamin’ ny mpianany, dia hoy Izy taminy: Raha misy ta-hanaraka Ahy, dia aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy.35 Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara, dia hamonjy izany.36 Fa inona no soa azon’ ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy?37 Fa inona no homen’ ny olona ho takalon’ ny ainy?38 Fa na iza na iza no ho menatra Ahy sy ny teniko amin’ ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia ho menatra azy kosa ny Zanak’ olona, raha avy amin’ ny voninahitry ny Rainy mbamin’ ny anjely masina.
MARKA 8 :34-38
SAHIA MIJORO HO MPANARA-DIA NY TOMPO
1-Ampandefero ny fitiavam-bola aman-karena
Ny and 34 sy 35 raha fehezina dia toy ny milaza amintsika ny tsy tokony himatimatesana loatra amin’ny fitiavam-bola aman-karena eto amin’izao tontolo izao. Tsy afa-miaraka mantsy ny fanompoana an’ Andriamanitra sy mamôna (vola). Koa ampandefero ny fitiavam-bola aman-karena raha tena hanompo sy hijoro ho vavolombvelon’i Kristy isika. Voavidy vola avokoa amin’izao fotoana izao na ny rariny sy ny marina aza. Ny olona tsy sahy mijoro amin’ny finoana , noho ny vola dia efa nivarotra ny maha-kristiana azy.Koa sahia mijoro ho mpanara-dia ny Tompo . Mizaha hampandefitra ny fitiavam-bola aman-karena .
2-Hevero ka matahora ny farany
Ny and 38 dia mampahatsiaro antsika izany fitsarana izany .Izay mandà an’i Jesoa sy ny fampianarany mbamin’ny teniny ankehitriny ka menatra ny hijoro ho mpino kristiana dia hitsanga-menatra koa amin’ny fitsara farany. Koa ho antsika izay menatra na matahotra ny ho vavolombelon’ny Tompo dia tsarovy fa tsy ny atrehantsika ankehitriny ihany no fiainana. Hisy fitsarana hitondrana anao, mety hihevitra isika fa manana solovava ao amin’ny Ray. Mba ho menatra tahaka ny nataonao koa io mpisolovava io amin’izay fotoana izay. Noho izany, aza mijery fotsiny ny hita ankehitriny, fa hevero ka matahora ny farany .
Nahoana no mety ho menatra antsika ilay antenaina hisolo vava antsika amin’ny fitsarana farany ?
Mofon'aina - TALATA 12…